Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Deegaanka Bariire. – Calamada.com
Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Deegaanka Bariire.
calamada July 4, 2019 1 min read
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin waxey dagaal culus ku qaadeen Saldhiga iyo Fariisimaha Maleeshiyaatka Dowladda Federaalka iyo Shisheeyaha ay ka sameysteen Deegaanka Bariire ee Wilaayada Shabeelada Hoose.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa dhowr jiha ka weeraray Saldhiga iyo Fariisimaha Kufaarta iyo Murtadiinta ee Deegaanka Bariire, Waxaa dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay Deegaano iyo Degmooyin ka tirsan Shabeelada Hoose.
Dadka Deegaanka waxey xaqiijiyeen in Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay gudaha usoo galeen Deegaanka ayna Jirto Khasaara Nafeet iyo Mid Hantiyadeed oo Ciidamada Kufaarta AMISOM iyo Maleeshiyaatka Ridada lagu gaarsiiyay Dagaalkaasi.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin qeybtooda ka howlgasha Shabeelada Hoose ayaa sii kordhiyay weerarada ka dhanka ah Kufaarta iyo Murtadiinta duulaanka ku jooga Goobo ka tirsan Wilaayada Shabeelada Hoose.
Previous: Faahfaahin Laga Helayo Dil Ka Dhacay Duleedka Baardheere.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo-01-11-1440 Hijri.